Ibhola Legends: Pele Yashin nabanye abadlali omkhulu
Umlando wanamuhla football uyazi amagama amaningi amakhosi edume of lesikhumba ibhola. Ngokungangabazeki, zonke fan has a uhlu abasubathi ubhedu emhlabeni, okuyinto lungase lungahambisani nalolo izilinganiso, kuzo zonke izingxenye unyaka abezindaba eziningi. Siphendukela International Federation of Football Umlando Izibalo, okuyinto ngo-2000 ngu-inthavyuwa izintatheli kanye nezemidlalo jikelele Veterans №1 esungulwe umdlali best kwekhulu lama-20. Ngokusho abaphendulayo kakhulu, kwaba edume Umgadli Brazilian Pele.
Ngakho ngokuphelele uzwakale igama lokuqala nesibongo senkosi yase football. Wazalelwa 1940 eTrês Corações, idolobha elincane empumalanga Brazil, Edson wathatha izinyathelo kuqala umdlalo beqondiswa kuyise, yena ngokwakhe ehlasela iqembu kude. Ngokungangabazeki, onesiphiwo ngokwemvelo umfana Wawunodonga olukhulu emsebenzini ngokuzikhandla nangokwethembeka uthando olukhulu yomdlalo. Kakade usakhula esizayo inkanyezi wayemi phandle ontanga yabo isivinini kakhulu yokuhlabelela lefa futhi sekuhlasele ngezinyawo zombili.
Ingabe footballer ubhedu emhlabeni DEBUT the club Brazilian edumile emhlabeni wonke "Santos", lapho eneminyaka engu-ngisho 16 ubudala. Futhi ezinsukwini ezizayo, 1958, i-Brazilian eqenjini lesizwe, uba iqhawe emhlabeni. Ithimba "ophuzi" sikhathi bakhanya football izinganekwane ezifana Garrincha, Didi, Zagallo, kodwa ukuthi uPele igoli umgomo ngokuwina eWales esangweni e finals ikota. Can eside kwenziwe uhlu lwazo zonke izihloko kanye nemiklomelo, okuyinto lithole phakathi nenkonzo yakhe yokuba Edson. Kuwufanele ukusho ukuthi namanje umdlali kuphela emhlabeni ophumelele kathathu Cup (1958, World 1962, 1970).
Unozinti best in the world
Unozinti Kuhle emhlabeni ekhulwini lama-20, umdlali wethu odumile Lev Ivanovich Yashin wayebhekwa. Nge zalo ezinhle nokudidiyela ukunyakaza kanye ukusabela kumnandi, kubhekwa iphayona football. Nguye owaqala okungaphezu endaweni isigwebo ngokusiza ukubhubhisa abavikeli sokuhlaselwa abaphikisi sika. umbono wakhe omuhle kakhulu emkhakheni, kanye nokujikijela eqondile ibhola esandleni ivumela umdlali we-Moscow "Dynamo" neSoviet isiqhema ngokushesha afeze balwe ukuze umgomo abaphikisi sika. Lezi izindlela lobuchwepheshe Unozinti ochwepheshe abaningi bezokwelapha futhi manje ngokuthi "yashinsky".
Iqembu lesizwe USSR, okuyinto wadlala legend ezinjalo football njengoba Igor Netto, Valentin Ivanov, Slava Metreveli, uViktor Ponedelnik nabanye, wathandwa Championship yokuqala ngqa European ngo-1960. Lev Yashin iwine isicoco unozinti best of the tournament. Umsubathi yethu futhi kuze kube namuhla, umgomo kuphela, okuyinto yaklonyeliswa "Golden Ball". Cup, minyaka yonke eyanikezwa ama footballer kakhulu eYurophu, yatholwa Yashin ngo-1963. Phakathi nenkonzo yakhe yokuba, umsubathi omkhulu wachitha 817 imidlalo kanye 207 babo ayizange iphumelele ibhola inetha lakhe siqu.
Izinganekwane football emhlabeni
abadlali Omkhulu we oludlule - German Franz Beckenbauer, le Argentinean Diego Maradona, waseFrance uMichel Platini - wenzé banikela ngendlela ebalulekile ekuthuthukiseni umdlalo othandwayo. Leso simo sengqondo, isimo sengqondo wordly nokuzinikela in zonke game waziletha uthando nokuhlonishwa abalandeli.
Ibhola Legends zinengxenye izenzakalo eziningi elalinikezelwe ukukhuthazwa umdlalo. Ezinye zazo, ezifana wasemuva Romanian Răzvan igundane noma Argentina Lionel Messi, babe siqu izisekelo yabo yesihle, bekwi usebenzisa izingane abadinga usizo.
"Legends Cup" ngesiRashiya
Minyaka yonke kusukela ngo-2009, lo mqhudelwano ebanjwe Russian Federation, okuthiwa "Legends Cup". Kuyo abadlali thatha amaqembu kazwelonke iqhaza okungenani iminyaka engu-35. Ngaphezu yezemidlalo ingxenye football izinganekwane ubambe master emakilasini izingane futhi esiza abantulayo izenzakalo izikhungo zezingane.
Alexander Nikiforov: Biography nomsebenzi umdlali webhola lezinyawo lase